Layma's World: သနပ်ခါးပန်းပြောတဲ့ “ သနပ်ခါးပန်း”
ကျွန်မ နာမည် ..... “သနပ်ခါးပန်း” လို့ ခေါ်ပါတယ်.....။
ကျွန်မရဲ့ အသားက ..... ၀ါဝါ၀င်းဝင်းလေးပါ.....။
ကျွန်မ.....အစိမ်းရောင် အသိုက်အမြုံမှာနေပါတယ်..... ။
အစိမ်းရောင် နန်းတော်ရဲ့ လေသာပြတင်းကနေ အ၀ါရောင် မင်းသမီးလေး ကျွန်မ.... မျက်နှာပြလိုက်တဲ့ အခါ..... တလောကလုံးကလူတွေ ငေးမောကြည့်ကြပါတယ်....။ ကျွန်မကို မြင်ရတဲ့ အခါ သူတို့ကြည်နူးသွားတတ်ပါတယ်......။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မက မလှပါဘူး..... တပွင့်တည်းဆိုရင် ကျွန်မက အကျည်းတန်ပါတယ်...... မနှင်းဆီတို့ .....မသစ်ခွ တို့ လို မတင့်တယ်ပါဘူး......။ ကျွန်မရဲ့ ညီမတွေနဲ့ဝန်း ရံထားလို့ သာ ကျွန်မမှာ အလှရှိတာပါ.....။
မင်းသမီးလေးလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကို တင်စားထားပေမယ့် ကျွန်မက တော်ဝင်ပန်း မဟုတ်ပါဘူး.....(ပန်းတိုင်းဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို မင်းသမီး လို့ စိတ်ကူးယဉ် မိတာ ပြစ်မှု မမြောက်လောက်ဘူး ထင်ပါရဲ့......) ကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ ပွဲလမ်းသဘင်တွေမှာ ကျွန်မ နေရာ မရပါဘူး.....။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မလဲ ပန်းပါဘဲ.....။ ပန်းဆိုတော့ ခြွေသူ.... ပန်သူ... ရှိတာပေါ့လေ....။
ကျွန်မ အနားကဖြတ်သွားတဲ့ လူတိုင်းက မျက်လုံးမှိတ်ပြီး ခပ်လှမ်းလှမ်းကနေ တအားမွှေးကြူသွားကြတယ်....။ ကျွန်မရဲ့ ရနံ့ က မွှေးလှသည်လေ....။ ချစ်စဖွယ်ရနံ့ သင်းသင်းလေးကို ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရတာကိုက ကျွန်မအတွက် ဘုရားပေးတဲ့ “ဆု” ပါ....။ အထူးသဖြင့် မြန်မာလူမျိုးတွေ စွဲမက်တဲ့ အနံ့ ..... နှစ်သက်တဲ့ အနံ့ ဖြစ်နေတာ ကျွန်မအတွက် ကံကောင်းခြင်းပါ......။
ကျွန်မ တော်ဝင်ပန်းမဖြစ်တာ ၀မ်းမနည်းပါဘူး.... အကျည်းတန်တာကိုလဲ မသိမ်ငယ်ပါဘူး..... အဖော်တွေရှိမှ တင့်တယ်ရတာကိုလဲ အားမငယ်ပါဘူး.....။ ကျွန်မ ကြေကွဲ ရတဲ့ အကြောင်းရင်းက တစ်ခုတည်း......တစ်ခုတည်းပါပဲ.....။ အဲဒီတခုက ကျွန်မကိုတော်တော်ဝမ်းနည်းစေတယ်.....။ အဲဒီတစ်ခုကြောင့် ကျွန်မ အသည်းတွေ နာလှတယ်......။ အဲဒါက........................................................................
ရှင်တို့ ကြားဖူးမှာပါ.... “ သနပ်ခါးပန်းက ပန်သူမမွှေးဘူး..... လက်တကမ်းကလူ မွှေးတယ် ” ဆိုတာလေ.....။ ကျွန်မကို ချစ်လှချည်ရဲ့.... မြတ်နိူးလှချည်ရဲ့ ဆိုပြီး ပန်ဆင်ထားတဲ့သူက ကျွန်မရဲ့မွှေးရနံ့ ကိုမရဘူး.... ကျွန်မရဲ့ တန်ဖိုးကို မသိရှာဘူး.....။ သိပေမယ့် ဒါဟာတန်ဖိုးလို့မယူဆတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်.....။ အဝေးကလူ.... နံဘေးကလူ.... လက်တကမ်းကလူတွေကတော့ ကျွန်မက ရနံ့ မွှေးတဲ့ ပန်းကလေးတဲ့.......။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလေ.... ကျွန်မက ပန်းပဲ.... အမြတ်တနိုးနဲ့ပန်ဆင်ခံရတာကိုက ကျေနပ်စရာပါ.....။ တန်ဖိုး ဘယ်လောက်သတ်မှတ်လဲ..... ဘယ်လိုသတ်မှတ်လဲ ဆိုတာ အရေးမကြီးပါဘူး..... ကျွန်မက ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုမှမဟုတ်ဘဲ.......။ ကျွန်မက “သနပ်ခါးပန်း” လေ.....။ ။
နောက်ဆက်တွဲ ။ ။ မိန်းမတွေဟာ သနပ်ခါးပန်းနဲ့ တူပါတယ်....။ ဂုဏ်သိက္ခာ....၊ ကိုယ်ကျင့်တရား.... ဆိုတဲ့ အဖော်တွေ ၀န်းရံထားမှတင့်တယ်ပါတယ်......။ ပိုင်ဆိုင်သူက တန်ဖိုးမသိဘဲ.... ဘေးလူ နှစ်သက်တဲ့ တန်ဖိုးတွေလဲ ရှိနေတတ်ပါတယ်....။
၀န်ခံချက် ။ ။ လပြည့်နေ့ က “လေးမ” စိုက်ထားတဲ့ သနပ်ခါးပင်က ပန်းတွေပွင့်တော့ ဓါတ်ပုံရိုက်ထားမိပြီး သူ့ အကြောင်းရေးမယ်လို့စိတ်ကူးထားခဲ့တယ်.....။ အပျင်းထူနေတာနဲ့မရေးဖြစ်ခဲ့ဘူး....။ ဒီနေ့မအိမ့်ချမ်းမြေ့ရဲ့ “တန်ဖိုး” ဆိုတဲ့ post လေးကိုဖတ်ပြီး comment မှာ အာချောင်ခဲ့မိလို့လေးမရဲ့ လက်ချောင်းတွေ keyboard ပေါ်မှာ အသက်ဝင်လာပြီး ဒီ postကိုရေးဖြစ်ပါတယ်.....။
Posted by Layma at 8:45 PM
“ကျွန်မရဲ့ ညီမတွေနဲ့ဝန်းရံထားလို့ သာ ကျွန်မမှာ အလှရှိတာပါ”
အဲဒီအပိုဒ်ဖတ်ပြီး တော်တော်ကြာကြာလေး တွေးနေမိတယ်..
“အဝေးကလူ.... နံဘေးကလူ.... လက်တကမ်းကလူတွေကတော့ ကျွန်မက ရနံ့ မွှေးတဲ့ ပန်းကလေးတဲ့.....”
တစ်ကြောင်းဖတ်လိုက် စဉ်းစားခန်းဝင်လိုက်နဲ့ သေချာဖတ်ပြီး ပြန်သွားတယ်နော်။
"မိန်းမတွေဟာ သနပ်ခါးပန်းနဲ့ တူပါတယ်....။ ဂုဏ်သိက္ခာ....၊ ကိုယ်ကျင့်တရား.... ဆိုတဲ့ အဖော်တွေ ၀န်းရံထားမှတင့်တယ်ပါတယ်......။ ပိုင်ဆိုင်သူက တန်ဖိုးမသိဘဲ.... ဘေးလူ နှစ်သက်တဲ့ တန်ဖိုးတွေလဲ ရှိနေတတ်ပါတယ်....။"
လောလောဆယ်တော့ ဟိုင်းလိုက်ပဲ လုပ်ပါရစေ။ အတွေးတွေ တိုက်ဆိုင်လွန်းတယ်။ စာတစ်ပုဒ်ရေးနေခဲ့တာ ကြာပြီ ..။ အင်း.. ဘာတွေဖြစ်မလဲ မသိ။
ဆင်ခြင်ဖွယ် စဉ်းစားဖွယ် စာနာဖွယ် မှတ်ယူဖွယ် ဖြစ်ပေတော့သည် ..... အို ..... ပုရိသအပေါင်း ယောက်ျားကောင်းတို့ ..........
မမလေးမ ပြောပြမှ သနပ်ခါးပန်းရဲ့ ဂုဏ်အင်နဲ့ မိန်းမတွေကို နှိုင်းယှဉ်မိတော့တယ်။ မမရေးတာ အရမ်းကောင်းတယ်။
မလေး…….(တစ်ကြောင်းဖတ်လိုက် စဉ်းစားခန်းဝင်လိုက်နဲ့ သေချာဖတ်ပြီး ပြန်သွားတယ်နော်။)
ကျေးဂျူး မလေး…. မလေးရော လေးမ ပြောတာထောက်ခံလားဟင်….။
မပန်……..မပန် နဲ့ လေးမ တိုက်ဆိုင်တာ တော်၂များပြီ…. သိလား မပန်… ပျော်စရာကြီးနော်….။(အင်း.. ဘာတွေဖြစ်မလဲ မသိ။) သိချင်လာပြီ…မပန်…မြန်၂လေး…Pls ။
ဂျယ်ရီ….. မိန်းကလေးတွေပဲ အားပေးတဲ့ post ကိုဝင်ပြီး ဆင်ခြင်သွားတာ သိပ်ကျေးဇူးတင်တာဘဲ….(မှတ်နော်….မှတ်နော်)….။
hninhnin…….ညီမလေးရော ဘယ်လိုထင်လဲ…။ အားပေးစကားရေးသွားတာ ကျေးဇူးပါ…။
မလေးမ … ရေးနေကြ ခရေ တွေကို သနားတယ် ။ ဒီမှာ သနပ်ခါးပန်းပင် တွေ့နေလို့ ။
လေးမ.. ဒီပို့စ်လေးလည်း ကြိုက်ပြန်ရော . မမြင်ရတာ ကြာတဲ့ သနပ်ခါးပန်းပုံတွက် ကျေးဇူးး)
မဂျစ်…ကျေးဇူးပါ….သနပ်ခါးပန်း ပန်မလား….ပန်မယ်ဆို ပို့ လိုက်မယ်နော်….